Sidee cilmiga dhaqaluhu u xaliyaa hoos u dhac ku yimada awooda wax iibsi ee bulshada (WQ: Mukhtaar Cabdi Cilmi) | Hangool News
Sidee cilmiga dhaqaluhu u xaliyaa hoos u dhac ku yimada awooda wax iibsi ee bulshada (WQ: Mukhtaar Cabdi Cilmi)
Sidoo kale ururka caalamiga ah ee ka faaloda arimaha dhaqaalaha ee layidha( American Economic Association) wuxuu leyahay dhaqaale waxaa weeyan sida ay dadku u isticmaalaan khayraad (resource) ay haystaan una qaataan doorashada saxda ah ee ugu haboon.
Isla su,aashaa hadii aniga lay waydiin lahaa waxaan kaga jawaabi lahaa waa sida khayraad aad haysato loogu isticmaalo loona habeeyo sida ugu wanaagsan uguna macquulsan waayo khayraadka addunka yaala waa kooban yahay (scarce resources) baahida dadka addunka taalana waa mid aan lahayn xad taasina waa aragti kale oo ay qabaan qaybo badan oo khuburada cilmiga dhaqaalaha ku talax tagay.
Dakhliga ka soo gala guud ahaan noocyada kala duwan ee ganacsiga.
Dakhliga ka soo gala shaqo la qabtay sida mushaharka, guno, yomiye iwm.
Dakhliga ka soo gala kirooyinka noocay doonto ha noqdee.
Dakhliga ka soo gala caawinta sida ka dadku isi siyaan qaraabo ahaan ,sadaqo ahaan ama hadyad ahan sida ku gulaysiga bakhtiyaanasibyada.
Diyaarso budget ku fadhiya xaqiiqada waxa ku soo gala kuna fadhisii baahidadad sida u kala horeeyaan una kala mihiimsan yihiin.
Waxaaad yaraynaysaa kharashaadka kaaga baxa waxyaabaha laga marmi karo ee aan noloshada mihiimaad badan u lahayn, si aad isugu filaysiiso kharashka bahidaada mihiimka ahna xal ugu hesho.
Marka ay qaali garoobaan qaybo kamida alaabtii ama adeegii aad isticmaali jirtay, awoodna aad u waydo, waxaad badhiaysa inay jirto alaabta mid lamida oo ka jaban una dhaw isticmaal ahaan sida tayada (Substitute goods and service)
Waxaad kordhinaysaa saacadaha shaqada si aad u hesho dakhli dheerada oo kaa kafeeya baahidada soo korodhay ama qiimayasha shayada aad isticmali jirtay oo qaali garoobay.
Waa inaad doonta il- dakhli oo kale oo aad ku kabto dakhligaagi hore bahidadiina daboosha.